Afaka miditra an-tanindrazana izao ny fianakavian'ireo vahiny monina any Russia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Rosia » Afaka miditra an-tanindrazana izao ny fianakavian'ireo vahiny monina any Russia
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Afaka miditra an-tanindrazana izao ny fianakavian'ireo vahiny monina any Russia.
Nanambara ny minisiteran'ny raharaham-bahiny rosiana fa ny fidirana ao amin'ny firenena dia homena rehefa aseho ny kopian'ny antontan-taratasy manamarina ny maha-mpirahalahy azy, toy ny taratasy fanamarinam-panambadiana, taratasim-piterahana ary antontan-taratasy hafa na fananganana fiambenana na fitokisana.
Ny fandraràna manohitra ny COVID-19 tsy hiditra amin'ny faritany rosiana dia tsy mihatra amin'ny fianakavian'ireo teratany vahiny sy olona tsy manana fanjakana mipetraka maharitra ao Russia.
Talohan'izao dia ny fianakaviana ao amin'ny olom-pirenena rosiana ihany no nanana fotoana nidirana tany Russia.
Ny minisiteran'ny raharaham-bahiny rosiana dia nanangana ny fanovana taorian'ny valin'ny antso maro.
Ny departemanta Consular an'ny Russia Minisitry ny Raharaham-bahiny dia nanambara tao amin'ny fantsom-pifandraisan'ny Telegram androany fa ny fandrarana mifandraika amin'ny COVID-19 izay napetraka teo aloha ny fidirana ao Rosia dia nesorina ho an'ireo mpianakavin'ny olom-pirenena vahiny sy olona tsy manan-tanindrazana monina maharitra ao amin'ny firenena.
“Ny fandrarana manohitra ny COVID-19 tsy hiditra amin'ny faritany rosiana dia tsy mihatra amin'ny fianakavian'ny olom-pirenena vahiny sy olona tsy manana fanjakana mipetraka maharitra ao Rosia (izany hoe manana fahazoan-dàlana hipetraka any Russia). Ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana dia misy vady, ray aman-dreny, zanaka, mpiray tampo, raibe sy renibe, zafikely, ray aman-dreny nitaiza, zanaka nitaiza, mpiambina ary mpiambina », hoy ny hafatry ny minisiteran'ny raharaham-bahiny rosiana.
The Ministeran'ny raharaham-bahiny nanondro fa ny fidiran'ireo olona voalaza ireo ao Rosia dia azo atao amin'ny fampisehoana kopian'ny antontan-taratasy manamarina ny maha-mpirahalahy azy, toy ny taratasy fanamarinam-panambadiana, taratasy fanamarinam-piterahana sy antontan-taratasy hafa na fananganana fiambenana na fitokisana.
"Raha tsy misy ny fifanarahana momba ny fitsangatsanganana tsy misy visa eo amin'ny fanjakan'ny havana sy ny federasiona rosiana, ny olona izay manasa, izay amin'ity tranga ity dia vahiny mipetraka maharitra Rosia, dia tokony hangataka amin'ny Minisiteran'ny Atitany ao Russia hamoaka fanasana, izay ho fototry ny fahazoana visa manokana ho an'ny havany amin'ny biraon'ny Consular Russia, "hoy ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny.
Araka ny voalazan'ny Departemantan'ny Consular, ny asa fanaovana fanitsiana mifanaraka amin'ny didim-panjakana navoakan'ny federasiona rosiana tamin'ny 16 martsa 2020 dia natomboky ny minisiteran'ny raharaham-bahiny rosiana taorian'ny valin'ny fitarainana maro, anisan'izany ny tambajotram-pifandraisan'ny vazaha nonina maharitra tao Russia, ary koa ny havany akaiky.
Nanampy ny Minisitra fa talohan'izay dia ny fianakaviana ao amin'ny olom-pirenena rosiana ihany no nanana fotoana nidirana tao Russia ho ampahany amin'ny ady amin'ny areti-mifindra coronavirus.